Shiinaha ayaa hadda ah shirkadda ugu sareysa ee 'filinka' filinka awoodda leh ee warshadda korantada wadata warshadaha korantada iyo alaab-qeybiyeyaasha | CRE
Awoodaha Awood-sameeye ee la sameeyay oo loo adeegsaday qulqulka-isku-xirka DC
Koronto-dhaliyeyaasha filimada DC ee awoodda sarreeya ee beddelka awoodda
Awooda Tamarta Sare ee Tamarta Awooda Sare leh leh shahaadada UL ...
Ustaatireeyaha Filimka UL ee Shahaadada leh ee Filitaanka DC (DMJ-MC)
Awooda Filimka iskujira ee awooda korantada ...
Madaxa Kala Saarka AC (AKMJ-MC)
Kabtanka Filimka metriyey ee loogu talagalay Defibrillator ...
Kantaroollada Snubber ee polypropylene waxaa loo adeegsaday Voltag sare ...
Naqshadeynta heerka sare ee IGBT Snubber capacitor ee loogu talagalay po ...
Cuubber tayo sare leh oo leh awooda culeyska garaaca wadnaha
Naqshadeynta ugu sarreysa ee kartida filimka qafiifka ah ee xilligan ...
Hawada sare ee DC-ga isku xidhka filimka awoodda korantada ...
Naqshadaynta Dhismaha Isku-Darka Kulubka Isku-Dhafka ah
Awoodda korantada ee elektronikada u ah keydinta tamarta
Awooda filinka elektaroonigga ah ee korantada
GTO snubber capacitor ee qalabka elektiroonigga ah
Kariyeyaasha Basaska DC ee loogu talagalay beddelayaasha Ku-Meelgaarka ah ee IGBT ...
Xalka qallalan ee loo yaqaan 'capacitor solution solution for traction ...
Xarkaha sare ee filimka DC ee awooda sare ee tamarta wadata korantada
1. Xirmooyin caag ah, oo lagu shaabadeeyay resin eco-fridendly epoxy, hogaamiyayaal naxaas ah, cabbir loo habeeyay
2. Adkeysiga ujirta sare, filimka polypropylene ee iskiis u bogsashada
3. ESR hooseeya, awood maarayn heer sare ah oo hadda socota
4. ESR hoose, si wax ku ool ah u yaree korantada rogaya
5. Awood ballaadhan, qaab dhismeedka is haysta
Range 温度 范围 / Heerkulka kala duwan -40 ℃ ~ 105 ℃
Range 温度 范围 / Xaraarada heerkulka -40 ℃ ~ 105 ℃
Voltage Koronto / Rats koronto 450V.DC-1100VDC
Awooda Cn / Qiimeynta Qiimeynta 450-1000μF
偏差 /Cap.tol % 5% (J)
Voltage Joogto korantada Vt-t 1.5Un / 10S (20 ℃ ±)5℃)
Factor 角 正切 / Sababta Khilaafka tgδ≤0.001 f = 100Hz
Resistance In / Caabuq ku neefsashada Rs × C≥10000S (at20 ℃ 100V.DC 60s)
串联 电阻 / ESR ≤0.3mΩ (10KHz)
自感 / ls 20nH
/ Rth 1.8K / W
电流 / Max. Irms hadda 140A (70 ℃)
Voltage / Koronto-dhaliye aan caadi ahayn oo soo noqnoqda (Naga) 675V.DC
峰值 电流 / Ugu sarraynta ugu sarreysa hadda (Î) 5KA
Current 电流 / Xilliga ugu badan ee qulqulaya (Waa) 15KA
Material 料 / Qalabka buuxinta Resin ama Polyurethane, nooca qalalan
Quo 效率 / Qoondada dhicitaanka ≤50Fit
Expect 寿命 / Rajada nolosha eeg sawir
Heerka tixraaca IEC 61071; AEC Q200D-2010
/ Miisaan ≈2.3kg
Dim / Cabir cabir 275mm×72mm×70mm
Awoodda filimada awoodda sare leh ee tikniyoolajiyadda is-daaweyntu waa mid ka mid ah xalalka elektaroonigga xoogga ee injineerrada EV iyo HEV ay isku halleyn karaan inay la kulmaan cabbirka adag, culeyska, waxqabadka, iyo cabbirka kalsoonida eber-catastrophic-guul-darrida suuqan dalbanaya.
Awoodda filimada awoodda leh ee awood u leh gudbinta xalka naqshada ee la isku halleyn karo ee EVs iyo HEVs waa inay la kulmaan dhowr cabirro gaar ah oo quseeya agabka filimaanta, qaabaynta, iyo qaabeynta.
Horumarka waarta waxay noqotay fikrad muhiim ah oo waari ah xilligan casriga ah. Gaar ahaan, warshadaha tamarta, nadiifinta, xalka tamarta dib loo cusbooneysiin karo waxay badalayaan habab dhaqameedyada ku saleysan saliida. Iyada oo EV iyo HEV ay yihiin suuqa soo kacaya, soo-galeyaasha waxaa looga baahan yahay inay yeeshaan cabbir yar, cufnaanta tamar sare, bandgap ballaaran (WGB) iyo eber-catastrophic-failure si loogu beddelo mashiinka gubashada gudaha ee dhaqameed (ICE). Sidaas darteed, awoodda filim metelaysa ayaa ah mid lama huraan looga baahan yahay mustaqbalka EV iyo HEV si loo qanciyo shuruudahan suuqa.
Awoodda filimka metil ee CRE waxay leedahay muujinta is-bogsiinta, karti looga hortago musiibo markii ay cilad gudaha ah dhacdo. Filimka 'dielectric' ee ku jira awooddeena wuxuu kuxiran yahay maadada macdanta (iron metallic) kaasoo ah mid hawo lagu keydiyey oo leh dhumuc weyn oo ah daraasiin nanomitir oo keliya. Marka ay jirto dhibic daciif ah ama aan nadiif ahayn xagga dhimirka, jajab ayaa dhici doona. Awoodda ay siiyeen dheecaanku waxa ay ku filnaan doontaa inay ku daadato lakabka birta ee ku xeeran, ka takhalusto cilladdeeda oo ay si wax ku ool ah u bogsato awoodda.
Tikniyoolajiyadan is-daaweynta, awoodayaasheena filimka kuxiran ayaa lagu dabaqi karaa baahi ballaaran oo suuqa ah oo awood u leh inay fuliso shuruudaha elektiroonigga ah ee horumarsan oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaan 'roondada' ee loo adeegsado EV iyo HEV. Waxay leeyihiin rajo nololeed dheer iyo isku hallayn wax ku ool ah iyada oo baaba'inta masiibo eber aaney dhicin. Ka sokow faa'iidooyinka ka dhashay muujinta is-bogsashada, awooddeena ayaa sidoo kale ah kuwo aad u yar yar oo leh awood weyn. Si sahlan ayaa loo rakibi karaa oo waxay iska caabin karaan korantada sare.
Awoodda filimaanta metelaysa waxaa adeegsada naqshadaha 'CRE patent naqshadeynta'. Sida caadiga ah waxaa lagu dhajiyaa resin qalalan, oo ay ku dhaawacaan cajalad Myra oo lagu shaabadeeyey bir ama bir caag ah. Naqshadduhu waxay keenaysaa faa'iidooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin isu-dheellitirka hadda jira iyo dhaqan-celinta, ma jirto fidin heer-kul ah oo muhiim ah, garoon koronto oo sarreeya iyo qiimaha wax soo saarka oo hooseeya. Bobbin fara badan oo loo yaqaan 'capacitor bobbin' ayaa loo iibin karaa qaab dhismeedka baska si loo bixiyo qiyam ku saabsan is-miyir-qabad hoose oo loo isticmaali karo in lagu xadido xad-dhaafka-korantada inta lagu jiro wareejinta.
Iyada oo ah mid ka mid ah jawaabaha isbeddelka tamarta nadiifka ah iyo horumar waara, suuqa EV iyo HEV ayaa la rajaynayaa in ay si isdaba joog ah ugu fidaan uguna dambeyntii beddelaan moodooyinka ICE. Awoodaha Filimka biraha leh ee Wuxi CRE waxay noqon doonaan kuwa wax ku ool ah, oo la isku halleyn karo oo horseed u ah wax soo saarkaaga mustaqbalka.
Hore: Naqshadaynta Dhismaha Isku-xidhka gawaarida isku-dhafka ah ee Isku-dhafan Xiran & Gawaarida Korantada
Xiga: Sare u kaca ugu sarreeya ee naqshadeynta filimka qafiifka ah ee awooda sare leh ee naqshadeynta barnaamijyada elektiroonigga ee IGBT
Koronto isku xira DC ee korantada taraafikada
Dc Link Awooda elektaroonigga ah
Madaxa Filimada Dc-Link
Dukaan-isku-xidhka Filimka Dc-Link Metallized Polypropylene Film Capacitor
Xaraashka baska DC ee loogu badalo IGBT-ku saleysan ...
PCB wuxuu ku dhejiyay DC iskuxirka filimka awoodaha leh ee loogu talagalay ...
Naqshadeynta Awooda Filimka Awooda Gawaarida Korantada
Pin Terminalka PCB-ga ee loogu talagalay soo noqnoqoshada sare / ...